Dhaxalka Hantidii Diego Maradona Oo Mushkilad Ka Taagan
Matias Morla oo ah qareenka halyeygii reer Argentina ee Diego Maradona ee usbuucii hore geeriyooday ayaa waxa uu bilaabay nidaam lagu qaybinayo hantidii laga dhaxlay laacibka geeriyooday, taas oo la sheegay inay noqon doonto mid adag.
Xaqiiqooyinka ka diiwaan gashan kulanka
Rikoorkii Liverpool ee Anfield ayaa jabay
Maradona oo wadne istaag u geeriyooday ayaa waxa la aasay shalay kaddib laba maalmood oo baroor-diiq iyo murugo uu ku jiray waddanka Argentina.
Hadda ayay bilaabantay hawl kale oo adag oo ah in carruurtii uu ka tegay iyo ehelkiisii loo qaybiyo dhaxalka hantidii uu ka dhintay.
Hantida moodka iyo noolka leh ee uu ka tegay Diego Maradona ayay ku yar tahay lacagta kaashka ah ee akownkiisa baanka ku jirta, waxaana lagu qiyaasay kaliya in aanay ka badnayn 150,000 dollar, hase yeeshee waxa jira guryo, baabuur iyo heshiisyo uu shirkado kula jiray oo ay kasoo xeroonayaan lacago.
Marka la isku-geeyo guryaha, baabuurta uu ka tegay oo ay ku jiraan Rolls Royce Ghost iyo MBW i8, oo lagu daray heshiisyada xayaysiimaha uu samayn jiray ayaa waxa lagu qiyaasay inay gaadhi doonto lacag u dhaxaysa 75 milyan illaa 90 milyan oo dollarka Maraykanka ah.
Heshiiska ugu dambeeyey ee uu ku jiray ee ay lacagtu ka imanayso ayaa waxa uu yahay kooxda Ginmasnia ee uu tababaraha u ahaa illaa maalintii uu ka geeriyoonayay, heshiiska xayaysiinta ee Puma, xuquuqda sawirka ee uu kula jiray Konami iyo shrikadda EA Sports ee samaysa ciyaar-gacmeedka ee PES iyo tan kale ee ciyaar gacmeedka FIFA.
Dhibaatada ugu weyn ayaa waxay ka taagan tahay ubadkiisa oo shan ka mid ah la garanayo, dunida oo dhanna ogtahay, balse waxa jira lix carruur ah oo kale oo la sheegay inay ku doodaan inuu isagu dhalay oo aan si sharci ah loogu aqoonsanayn, isaguna aanu qiranin.
Si kastaba, hawsha qaybinta dhaxalka Maradona ayaa la sheegay inay noqon doonto mid aad u adag.
axadle 6026 posts
It’s essential eat extra protein to reduce weight, the research says
Al-Shabaab claims a lethal suicide assault in Somalia’s capital